यस्तो छ ५६ करोडको सुपरबाइक | Automotive News Nepal
यस्तो छ ५६ करोडको सुपरबाइक २ असोज, २०७५
विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा गुड्ने सुपरबाइक कुन होला ? कहिले अनुमान गर्नुभएको छ ? छैन भने आउनुहोस् आज हामी तपाईंलाई विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिको सुपरबाइकको बारेमा जानकारी दिदैं छौं ।
डज टोमाहक विश्वको सबैभन्दा पावरफुल सुपरबाइक हो । यो सुपर बाइकको टप स्पिड ६ सय ७२ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । यो सुपरबाइक १४ वर्ष अधि नन स्ट्रीट लिगल कन्सेप्टको रुपमा तयार पारिएको थियो । यो बाइकको मुल्य नेपाली रुपैयाँमा हिसाव गर्दा करिब ५६ करोड पर्न आउँछ ।
डज टोमाहक सुपरबाइक सन २००३ मा नर्थ अमेरिकाको इन्टरनेशनल अटो शोमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यसको डिजाइन र स्पिड देखेर बाइक प्रेमीहरु आकर्षित भएका थिए । यो बाइकमा १० ठुलो क्षमता भएको इन्जिन जडान गरिएको छ ।
विश्वमा डज टोमाहक सुपरबाइक ९ जना व्यक्तिले मात्र किनेका छन् । डज टोमाहक सुपरबाइकले ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिड मात्र १.५ सेकेन्डमा तय गर्छ । यसमा ८.३ लिटर भी–१० एसआरटी भाइपर इन्जिन जडान गरिएको छ । यो सुपरबाइकको इन्जिनले अधिकतम ५०० एचपीको पावर जेनेरेट गर्न सक्छ ।
यसमा ४ वटा टायरको प्रयोग गरिएको छ, २ वटा अगाडि र २ वटा पछाडि । डज टोमाहक सुपरबाइकले ७१२ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा लकिङ प्रणली
लुम्बिनी - नेपाल आयाल निगम क्षेत्रीय कार्यालय भलबारीले तेल बोक्ने ट्यांकरमा आजबा...
देशभरका सवारी रुटको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं - सरकारले देशभरका सवारी रुटहरुको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । धेरै सडक...